“စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ စစ်သားတိုင်း၊ ရဲတိုင်း၊ အရာရှိတိုင်း၊ ဥပဒေဝန်ထမ်းတိုင်း၊ တရားသူကြီးတိုင်း၊ ပြည်သူတိုင်းက မိမိကိုယ်ကို ဆောက်တည်နိုင်မှုကို ဆိုလိုစေချင်သည်။ ၂၀၀၈ ခု ဥပဒေမှာမျိုး စစ်ရာဇဝတ်ကောင်များကို အကာအကွယ်ပေးပြီး ပြည်သူများကို အသက်ရှူ၍ ရရုံလေး ဖိနှိပ်ထားသည့် ဥပဒေကဲ့သို့ မဖြစ်စေလိုပါ။”
စဈတှမှော ကိုဗဈလူနာတဈဦးထပျမံသဆေုံး၊ ရခိုငျမှာ သဆေုံးသူ သုံးဦးရှိပွီ
ဘူးသီးတောငျမွို့တှငျ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ ၇ အထိထပျတိုး
RFA Myanmar ဌာန
မဟာဗမာဝါဒီတို့၏ ကရင်လူမျိုးအပေါ် ထားရှိသော ထာဝရသဘောထား
( ၁ ) ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကျန်စေရ။
( ၂ ) ကရင်မှန်ရင်အစိတ်သားတောင်
( ၃ ) ကရင်မှန်ရင်ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့။
( ၄ ) ကရင်မြင်ချင်ရင်နှောင်တချိန်
( ၅ ) လှံ ၊လှေ ၊လှည်း ၊လွှ မပီရင်သတ်။
( ဖုံပညာ့ရဲာသီ့) ရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းဆွဲငင်ဖမ်းစားနေဦးမည့်သူများ (1)
(cultural soft power) (1)
၁၂ ကြိမ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ ၈၈ မျိုးဆက် တက်ရောက် (1)
2010 နိုဝင်ဘာ စစ်တမ်းကိုပြန်သုံးသပ်ခြင်း (1)
၆ရက် ဆက်တိုက် တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရစစ်သား၂၀ကျော် ထိခိုက်သေဆုံး (1)
BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက် ၃၀ ဒီကေဘီအေနှင့် ပူးပေါင်း (1)
DKBA က BGFကိုသတိပေး (1)
DKBA ထိုင်းကိုပြန်လည်တုတ်ပြန်ပြီး အောက်ကလင့်ခ်မှာနှိပ်ပါ (1)
DKBA နဲ့ ထိုင်းအစိုးရကြား တင်းမာမှု KNU ကြားဝင် စေ့စပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်း (1)
DKBA နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကြား တင်းမာမှု အစိုးရ၀င်ညှိ VOA (1)
DKBA နှင့် အစိုးရတို့၏ လက်နက်ကိုင် ပဋ္ဋိပက္ခ မဖြစ်ရေး သဘော တူညီချက် (1)
DVB new (1)
Facebook တွေက ပြောနေကြတဲ့ ဦးခင်ညွန့် အကြောင်း (1)
KIA တပ်ရင်း (၈)နှင့် ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲတွင် ကြံဖွံ့စစ်သား ၁၅၀ ကျ (1)
KKO ဗဟိုကော်မတီဝင် နှစ်ဦး တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခံခဲ့ရ (1)
klo kwe အဖွဲ့ ရဲ့ ငါးပိရည်သီချင်း စကော ကရင်လိုနားဆင်ရန်။ (1)
KNDO ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သီချင်း (1)
KNLA တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစိုးရစစ်သည် ၆ဦး ထိခိုက်သေဆုံး (1)
KNLA-DKBAလက်ချက်ကြောင့် ခမရ(၂၀၂) တပ်ဖွဲ့ဝင်( ၁၀)ဥိးနီးပါး ကျဆုံး (1)
KNU ခရိုင်(၅)ခုမှ အစိုးရတပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကို FBR ထုတ်ပြန် (1)
KNU နှင့် ကြံ့ဖွံ့  တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ် (1)
KNU ဗဟိုကော်မတီဝင် မန်းငြိမ်းမောင် ပျောက်ဆုံးနေ (1)
KNU ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ဘားအံမြို့သို့ ထွက်ခွာ (1)
KNU ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီဝင်များ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ (1)
KNU မန်းငြိမ်းမောင် နောက်ထပ်စွဲချက်တင်ခံရ (1)
KNU ငြင်းဆိုချ (1)
KNU ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့သာ ဆွေးနွေးလို (1)
KNU သတင်းစာရှင်းလင်း (1)
KNU အတွက် တိကျသော အဖြေမရသေး (1)
KNU အရာရှိမန်းငြိမ်းမောင်အားပြန်လည်လွတ်ပေး (1)
KNU ခေါင်းဆောင်တဦး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖမ်းဆီးခံရ (1)
KNU ခေါင်းဆောင်မန်းငြိမ်းမောင် မတရားအသင်းပုဒ်မနဲ့ ထောင်ချခံရ (1)
KNU နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တို့ ဖားအံတွင် ဆွေးနွေးပွဲစတင (1)
KNU နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တို့ နေ့လည် ၁၂နာရီအထိ ဆွေးနွေးချက် (1)
KNU နှင့်တတိယ အကြိမ်မြောက် ဆွေးနွေးရေး မြန်မာ အစိုးရ ရက်ရွှေ့ဆိုင်း (1)
KNU နှင့်အစိုးရကျင့်ဝတ်များ နှစ်ဖက် သဘောတူညီခဲ့ (1)
KNUနှင့် မြန်မာ အစိုးရတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြီး (1)
NLD တည်ထောင်သူများတွင် အမျိုးသမီး ထက်ဝက်ကျော်ပါဝင် (1)
NUFCျမဒတခ (1)
Video မှတ်တမ်း (7)
VOA နဲ့ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်( အင်တာဗျူး) (1)
ကချင်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း စစ်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်သား ၄၀ ကျ (1)
ကချင်ပြည်နယ်က ကြံ့ဖွံ့  စစ်သားကျဆုံး အရှင်ဖမ်းမိ တိုက်ပွဲ (1)
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ထိုးစစ် အရာရှိတဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရ (1)
ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံးKNUသိန်းစိန်အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးရန်ရှိ (1)
ကရင်ဓါတ်ပုံသတင်းထောက် အကြောင်း အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆုရ (1)
ကရင်နီအမျိုးသမီးအား စစ်တပ်မှ အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြုကျင့် (1)
ကရင်ပြည်နယ် ဘုရားသုံးဆူနဲ့ ကော့ကရိတ် အနီးဝန်းကျင်းက တိုက်ပွဲ ၂ ပွဲ (1)
ကရင်ပြည်နယ်တွင်ကုန်တင်သင်္ဘော ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခံရ (1)
ကရင်ဒေသ အပစ်ရပ်ရန် သဘောတူ (1)
ကရင်နှစ်ပါတီ နာမည် အငြင်းပွားဖွယ်ရှိ (1)
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ၍ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ ၇ဦး ထိခိုက်သေဆုံး (1)
ကလို့ထူးဘောအဖွဲ့နှင့်ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဆင့်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (1)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျောင်း ဆရာမကို မြန်မာတပ်မှ ပစ်သတ် (1)
ကျမ သိသော ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်(နှင်းပန်းအိမ်) (1)
ကျုပ်လှန်ရေးသမား မန်းကိုကို (1)
ခလရ (၂၀)မှ စစ်ကြောင်းမှူး မုဒိန်းမှုဖြင့်တရားစွဲခံရ (1)
ငါးပိရည်သီချင်း ပိုးကရင်လိုနားဆင်ရန်။ (1)
စစ်ရဟတ်ယာဉ်ပစ္စည်း တရုတ်ကို ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ တရာ (1)
စစ်အစိုးရအနိုင်ကျင့်မှုကြောင့်DKBA ငြိမ်းချမ်းရေးဖျက်သိမ်း (1)
စစ်အုပ်စုက နိုင်ငံရေးကို အခြားနည်းနဲ့ ဆက်လုပ်နေပြီလား (1)
စစ်ပြေငြိမ်းဘို့ မလွယ်တော့ဟု KIO ဆို (1)
စိုးဒို မှ ကရင် ဘလော့ဂါ များဆီသို့ ပေးပို့သောစာ (1)
စိုးရတပ်များ ဆွဲမိုင်းဖြင့် အဆက်မပြတ် တိုက်ခိုက်ခံရ (1)
ဆူနာမီမှာ ပျောက်ဆုံးကလေးငယ် ၇ နှစ်အကြာမှာ မိဘနဲ့ ပြန်ဆုံ (1)
ဇွဲကပင်မြေမှ ဖါးစည်သံ(သီချင်း) (1)
တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အရေး (1)
တပ်များ အပစ်ရပ်ထားရန် KNU ညွှန်ကြား (1)
တာတေစနေသား ဥိးနု ဘာလဲ ဘယ်လား? (1)
တိုင်းမှူးနှင့် စစ်အရာရှိကြီးများ ယာဉ်တန်းကို DKBA တိုက်ခိုက် (1)
တိုင်းရင်းသားကောင်စီ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ဖွဲ့တော့မည် (1)
တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တန်းတူဆက်ဆံရေးမူ ဦးသိန်းစိန်လက်တွေ့ကျင့်သုံး (1)
ထန်းတောထဲက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း .. မောင်လှဝင်း(မြင်းခြံ)(ကဗျာ) (1)
ထီ့ခါန်.ဟ်ုဍေါဟ်လ်ုအ်ုဟှုင်.ခိုင့်( ဘအူ.ကျီးကေဝ်) (1)
ဒိုမန်းငြိမ်းမောင် လွတ်မြောက်လာရန် KNU မှ ထပ်မံတောင်းဆိုသွားမ (1)
ဒီလိုပုံနဲ့ မိုးကြီးချုပ်လျှင် " (1)
နယူးယော့ ရောက်ဇာဂနာ (1)
နယ်ခြားစောင့်တပ် ၂နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ရွှေကုက္ကိုတွင် ကျင်းပ (1)
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်( ၇ ) ဥိးကို လက်နက် ၈ လက်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ (1)
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦးကို မူးယစ်ဆေးများဖြင့် မဲဆောက်တွင် ဖမ်းမိ (1)
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် လွတ်မြောက်လာ (1)
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်နေဟု အစိုးရပြော (1)
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်နဲ့ ကရင်တော သို့လောသို့လောမှ (အင်တာဗျူး)များ (1)
ပူးပေါင်းတပ်တွေ လက်ချက်နဲ့ အစိုးရ စစ်သား ၁၃ ဦးသေ (1)
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု(၂) (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် (1)
ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင် ကို မင်္ဂလာဒုံမှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေး (1)
ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ကြောက်တဲ့ ပြဿနာ (1)
ဖလူး စခန်းထိုင် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ စစ်တပ်ကို DKBA ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် (1)
ကြံဖွံ့ တပ် မှိုင်းနှင်းမိ သေဆုံးဒဏ်ရာရ (1)
ကြံ့ဖွံ့ တပ်ပြောင်းလဲချိန်ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရ (1)
ဗမာနဲ့ ကုလားအတူတူဘဲလား? (1)
ဗမာတွေရဲ့ ကိုယ်တွင်း မကောင်းဆိုးဝါးများ (1)
ဗလီတွင် ၀တ်ပြုပြီး ပြန်အထွက် မိုးကြိုးပစ်ခံရ၍ ၁၀ ဦးသေ၊ ၂၀ ဒဏ်ရာရ (1)
ဗိုလ်ချုပ်လင်းထင်နဲ့ မဲဆောက်မြို့ သိမ်းတိုက်ပွဲနောက်ကွယ် (1)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (၁) (1)
ငြိမ်းချမ်းရေး လက်ဆောင်အဖြစ် မန်းငြိမ်းမောင်ကို လွှတ်မည် (1)
ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ နိုင်ငံရေး မလုပ်သင့်ဟု KNU ကဆို (1)
ဘားအံမြို့တော်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးကြပြီ – (1)
ဘားအံရောက် KNU ကိုယ်စားလှယ်များကို ကြိုဆိုပုံတွေ (1)
ဘုန်းကြီးကျောင်း မီးရှို့ခံရတဲ့ မှတ်တမ်းဟောင်း တခုနဲ့ ကျနော့ရဲ့ အမြင် (1)
ဘုရားသုံးဆူရှိ ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့များ လက်နက်ချရန် တောင်းဆိုခံရ (1)
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူများက သဘောထားကြေငြာချက် (1)
မင်းအုပ်စိုး ၏ လှူဒါန်းတတ်ကြပါစေ (1)
မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုမျှ မကြောက်ဟု ရခိုင်ပါတီ ပြော (1)
မန်းငြိမ်းမောင်ကို ရုံးတင် စစ်ဆေးနေ (1)
မန်းငြိမ်းမောင်ကို စွဲချက်များ ထပ်တင် (1)
မန်းငြိမ်းမောင်စိတ်ဓါတ်အခြေအနေရှေ့နေ သံသယရှိ (1)
မဟာလူမျိုးကြီးသွေးညှီစော်နံသော ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်သို့ (၂) (1)
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားရထား KIA ခြုံခိုတိုက် (1)
ယမန်နေ့ည (၁၁)နာ ရီတွင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယဗုံးပေါက်ကွဲ (1)
ယာယီအတိုက်အခိုက်ရပ်စဲသည့်နေ့က ကျဆုံးသော ရဲဘော်သို့ (1)
ခြစားမှုဖြင့် နာမည်ကြီး ငွေချမ်းသာလာနေသူ မူဆလင်တဦး (1)
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစိန်ခေါ်ချက် နှင့် ကရင်ဗမာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေး (1)
ပြည်နယ်၊ တိုင်းအလိုက် ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းချက် UNFC ငြင်းဆိုပြန်ကြား (1)
မြန်မာအစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက် စီမံကိန်း (1)
ရခိုင်ပြည်က ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ပါကစ္စတန်အစိုးရကို တာလီဘန်က ခြိမ်းခြောက် (1)
ရခိုင်လူမျိုးများကိုသိက္ခာချရန် ကြံ့ဖွံ့ငှါးရမ်းလုပ်ကြံ (1)
ရှမ်း-ကချင်နယ်စပ်မှာ မြန်မာအစိုးရစစ်သား ၇ ဦးသေဆုံး (1)
ရှမ်းပြည်နယ် နယ်စပ်တိုက် ပွဲတွင် မြန်မာအစိုးရ စစ်သား ၃၀ကျော် ကျ (1)
လွတ်ခါနီး နာရီပိုင်း အလိုမှ အမှုသစ်တိုး (1)
လွန်ဆွဲနေသော အစိုးရနှင့် KIO တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ (1)
လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်အတွင်း ပစ်ခတ်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား (1)
ဝန်ကြီးမောင်ဦး ဆဲရေးတိုင်းထွာလူကြီးမဆန်ခြင်းသတင်း (1)
သင့်တွက်ချည်ဖြူ (ကဗျာ) (1)
သင်ဘာဆက်လုပ်မလဲ ?(ကဗျာ) (1)
သမ္မတကြီးနှင့် အင်တာဗျူး (1)
သျှမ်းပြည်နယ်မှာ ကြံ့ဖွံ့ စစ်သားတိုက်ပွဲမှာကျဆုံး (1)
သာမညကျေးရွာသူ ရွာသားများ၏ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ အသိပေးခြင်း (1)
သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး၏ နာရေးကြော်ငြာ (1)
သူခိုးက လူကိုပြန်ဟစ်တဲ့ 8888 လေးလုံးဖြစ်ရပ်မှန်(ရုပ်မှန်-အသံမမှန်) (4)
သူတို့တတွေ လည်စင်းခံကြလေပြီ (1)
သပြေညိုလမ်းအခွဲမှာ ဝမ်းနည်းမှာလား (1)
အစိုးရနှင့် KNU ထပ်တွေ့ဦးမည် (1)
အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းစဉ် KNU ပြန်လည်သုံးသပ် (1)
အမုန်း Valentine's( အတီး မန်းရှာသို့လွမ်းဆွတ်ခြင်းကဗျာ) (1)
အမေရိကန်တစ်လွှားမှာအစိုးရိမ်လွန်ကဲနေသူမျုားအတွက် ဖတ်ရန် (1)
ကေအန်ယူ ထိမ်းချုပ်နယ်မြေမှ ထွက်သော သတ္တုများ အ၀ယ်လိုက် (1)
ကော့မူးမြို့  ရောက် ဒေါ်နန့်အောင်ဆန်းစုကြည် (1)
ခွေးအစိုးရတွေမှာတော့ ချေးမာ ချေးပျော့ရှိ (1)
ဒေါ်စုကို မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ ဝမ်းပမ်းတသာ ကြိုဆို (1)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကရင်ရွာဝါးသင်္ခ တွင်သန်းခေါင်စားရင်းဝင် (1)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်း သွားမည် (1)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မယ်လခရီးစဉ်အတို (1)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု (1)
ရှေ့ထွက်မိုင်းကြောင့် အစိုးရစစ်တပ် ၁၂ဦး သေဆုံး (1)
သေ့ဘောပိုးအနီး ဆုံဆည်းမြိုင်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား (1)
အောင်ကြီး ထောင် အနှစ် ၄၀ ချခံရ (1)
နှစ်ဖက်လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်KNU စတင်ဆွေးနွေး (1)
နိုင်ငံရေးကို စုပေါင်းလုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု UNFC ဆုံးဖြတ် (1)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ စတင်လွတ်မြောက် (1)
15th KNU Congress 2
15TH KNU Congress 3
Posted by KSNG MEDIA
မူရင်း - ရွက်မွန် - http://fine-leaves.blogspot.com.au/2013/01/blog-post_11.ht
ဇန်န၀ါရီလ ၃ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ)
KIA General Gunhtang Gam Shawng interview
အစိုးရ၏ လဂျားယန် ပွိုင့်တခုကို KIA ပြန်လည် သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့
ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) မဟာမိတ် ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့တို့သည်၊ ကြည်းကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် အမြောက်ကြီးများ၏ တလစပ် ပစ်ခတ် မှုဖြင့် အကာအကွယ် ရနေသော လဂျားယန်ရှိ အစိုးရ တပ်များ သိမ်းပိုက် ထားသော တောင်ကုန်း တခုကို ယနေ့ (၂း၁၅) နာရီ တွင် ပြန်လည် သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သည်ဟု ABSDF မြောက်ပိုင်း ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူး မင်းဌေးက ဆိုပါသည်။
“ လေယာဉ်ရော အမြောက်ရော ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ပစ်နေတဲ့ ကုန်းနှစ်ကုန်း ကနေ ကျနော်တို့ ဆုတ်ပေး ထားတယ်။ အဲဒီ ကုန်းကို အစိုးရ တပ်တွေ ၀င်သိမ်းတယ် မနေ့ ကပေါ့။ ဒီနေ့ ကျတော့ လက်နက် ကြီးနဲ့ လေယာဉ်ဗုံးကျဲ ဒဏ်ကနေ လွတ်တာနဲ့ ကျနော်တို့ တက်ပြီး သိမ်းလိုက် တာပါ။ တက်သိမ်း ပြီးတာနဲ့ အစိုးရ ဖက်က မြေပြင် တပ်ရော လက်နက် ကြီးတွေရော တိုက်လေယာဉ် နဲ့ရော တလစပ် ထပ်မံ ပစ်ခတ် တော့တာပါဘဲ” ဟု ဗိုလ်မှူး မင်းဌေးမှ ဆိုပါသည်။
လဂျားယန် စစ်မြေပြင်သည် KIA ဌာနချုပ် လိုင်ဇာကို သိမ်းပိုက်ရန် အချက်အချာ ကျသော နေရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤလမ်း ကြောင်းသည် ဗန်မော်-လိုင်ဇာ လမ်းကြောင်း၏ စစ်ဆင်ရေး အပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤ လမ်းကြောင်းကို ထိုးဖေါက်နိုင် ရန် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် အင်အား တထောင် ကျော်နှင့် ၁၀၅ မမနှင့် ၁၂၀ မမ လက်နက် ကြီးများ အပါဝင် လေကြောင်း အကူပါ တိုက်ခိုက် နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ပြင်းထန်စွာ စစ်ဆင် နေသည့် ကြားမှ KIA နှင့် ABSDF ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့ တို့က အရေးကြီး တောင်ကုန်း တခုကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရ တပ်များသည် ဆက်လက် ချီတက် နိုင်ရန် ဤ လဂျားယန် စစ်မြေပြင်ကို (၁၀၅ မမ နှင့် ၁၂၀ မမ) လက်နက်ကြီး များဖြင့် နေ့ည မဆိုင်းဘဲ ပြင်းထန်စွာ တလစပ် ပစ်ခတ် နေခဲ့ ပါသည်။ ထို့အပြင် လေယာဉ် များကလည်း ယနေ့ နံနက် (၈) နာရီ အချိန်မှ စတင်ပြီး လိုက်လံ ဗုံးကျဲ နေခဲ့ ပါသည်။ တိုက်လေယာဉ် (၄) စီး သည် လေးကြိမ်မျှ ပစ်ခတ် ခဲ့ရာတွင် တကြိမ်လျှင် လေယာဉ် (၂)စီး သည် အပြိုင် တလစပ် ပစ်ခဲ့ အပြီးတွင် ထပ်မံ ဗုံးကျဲ သွားသည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြု ခဲ့ပါသည်။
ရှေ့တန်း တစ်နေရာမှ တိုက်ပွဲဝင် ကချင် စစ်သည် တဦးအား မြင်ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ - Jadeland)
ဤကဲ့သို့ လေကြောင်း ပစ်ကူ ပေးပြီး နောက်ပိုင်း အစိုးရ တပ်များ ရှေ့တိုးရန် ကြိုးစား ချိန်၌ KIA နှင့် ABSDF ပူးပေါင်း တပ်တို့၏ ချေမှုန်း ခြင်းကို ခံရပြီး အဆိုပါ တောင်ကုန်း ကိုပါ လက်လွှတ် လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် ညနေ (၄)နာရီ အထိ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လျှက် ရှိပါသည်။
လဂျားယန် ဒေသ တဝိုက်သို့ ထိုးစစ် ဆင်လာနေသည့် အစိုးရ တပ်များမှာ တပ်မ ၁၀၁ လက်အောက်ခံ ခမရ ၃၁၇၊ ၄၁၄၊ ၄၁၆ တပ်ရင်းများနှင့် တပ်မ (၈၈) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၃) ရင်း အပြင် အခြားတပ်များလည်း ရှိကြောင်းနှင့် စုစုပေါင်း အင်အား (၁၄၀၀) ခန့် ရှိနိုင်ကြောင်း ABSDF က ဆိုပါသည်။
ဤစစ်ဆင် ရေး၏ ရှေ့တန်း ဗျူဟာရုံးမှာ ဒေါ့ဖုန်ယန်း နားရှိ မန်မော် အရပ်၌ ရှိပါသည်။ အစိုးရသည် လဂျားယန် စခန်းများကို သိမ်းပိုက် နိုင်သည်နှင့် KIA နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ရေးကို ထပ်ဆင့် ခေါ်မည်ဟု တွက်ဆ ထားပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် KIA ဌာနချုပ်ကို သိမ်းပိုက် ခြင်းထက် လှုပ်ရှား၍ မရအောင် စိုးမိုး ထားပြီး ကျန်ရှိ နေသည့် KIA အင်အား များကို ထိမ်းသိမ်း နိုင်ရန် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည့် နည်းကို ကျင့်သုံးမည်ဟု တွက်ဆ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အလားတူ ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်း မြို့နယ် တောင်နီ ကျေးရွာရှိ အစိုးရ စစ်စခန်း တခုကိုလည်း ယနေ့ နံနက် ၂ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် KIA က သိမ်းပိုက် လိုက်သည်ဟု KIA တပ်မဟာ (၂) မှ အရာရှိ တဦးက ပြောပါသည်။ ယင်း တိုက်ခိုက် မှုကို ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၅) မှ တိုက်ခိုက် လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ စခန်းတွင် ခရမ ၃၈၄ တပ်ဖွဲ့ များနှင့် ခလရ ၁၀၅ တပ်ရင်းမှ မန္တလေး- မြစ်ကြီးနားလမ်း လုံခြုံရေး ယူထားသည့် တပ်ဖွဲ့ များက နေရာယူ ထားပါသည်။ ထို့အပြင် KIA တပ်မဟာ (၄) ရှိ ကွတ်ခိုင် မြို့နယ် ၌လည်း တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန် လျှက်ရှိ ကြောင်း တအာင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့မှ ဆိုပါသည်။
လဂျားယန် တိုက်ပွဲမှ အစိုးရ သုံ့ပန်းနှင့် ရှရှား ဒုံးကျည်များ
ဒီဇင်ဘာ (၁၄) ရက်နေ့၌ ဖြစ်ပွား ခဲ့သော အစိုးရ တပ်ဖွဲ့၏ လဂျားယန် စစ်ဆင်ရေးတွင် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမို ကရက်တစ် တပ်ဦး တို့သည် အစိုးရ သုံ့ပန်း တချို့ကို ဖမ်းမိပြီး ရဟတ်ယာဉ်မှ ပစ်လွှတ် လိုက်သည့် မပေါက် ကွဲသော ရုရှားလုပ် ဒုံးကျည်ပါ သိမ်းဆည်း ရရှိ ခဲ့သည်ဟု KIA အရာရှိ တဦးကပြော ပါသည်။
“ အစိုးရ တပ်ကို ၀ိုင်းထားတဲ့ နေရာကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရှင်းနေ တုန်းဘဲ၊ ဒါဏ်ရာ ရထားတဲ့ တပ်သားတွေ (၇)ယောက် လောက် ဖမ်းမိ ထားပြီးပြီ၊ ကျောင်းသားတွေ ဘက်ကတော့ သူတို့ အစိုးတပ်က အလောင်း (၁၇) လောင်းကို ကောင်းကောင်း မွန်မွန် သဂြိုလ်ပေး လိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျန်တဲ့ နေရာကို ရှင်းနေ တုန်းဘဲ။ အဲဒီထဲက (၁၆) နှစ်တပ်သား အောင်အောင် ကတော့ ဒါဏ်ရာ ပြင်းလို့ မနေ့ ညနေက ဆုံးသွား ပါတယ်။ ထိထားတဲ့ နေရာကို သူတို့ စစ်ကူလည်း မလာဘူး၊ အဲဒီ တပ်တွေ ကဘဲ ဖြည်းဖြည်း လေးနဲ့ ဆုတ်သွား နေတာ။ တပ်ပျက် သလောက် ပါဘဲ သူတို့ ခံရတာ” ဟု ဆိုပါသည်။
ကချင် စစ်ပွဲအတွင်း မြန်မာ အစိုးရ ဘက်မှ အသုံးပြု ခဲ့သည့် ရုရှလုပ် ဒုံးကြည်များအား တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ - မြန်ကြီးနား ဘလော့)
အင်အား (၂၀၀) ခန့် ရှိသည့် အစိုးရ ခမရ (၃၈၈) နှင့် (၃၈၃) တပ်ဖွဲ့ များတို့သည် KIA တို့၏ ချေမှုန်း ရေးကို ခံနေ ရစဉ်တွင် အစိုးရ၏ မြစ်ကြီးနားမြို့ အခြေစိုက် အမှတ် (၅၀၃) နန့်ပေါင် လေတပ် စခန်းမှ Mi-24 Gunship ရဟတ်ယဉ် (၃) စီး သည်၊ လေတပ် စခန်းမှ (၃) ကြိမ် ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန် လာပြီး ဝေဟင်မှ မြေပြင်ပစ် ဒုံးများနှင့် Machine Gun များဖြင့် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ပစ်ကူ ပေးခဲ့ ပါသည်။ http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/2516--kia-.html
သို့သော် အစိုးရ စစ်ရဟတ်ယာဉ် (၃) စီး ထဲမှ တစီးသည် KIA ၏ ပစ်ခတ် မှုကို ခံရပြီး မီးခိုးများ ထွက်ကာ ပြန်ဆုတ် သွားခဲ့ သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် ဤတိုက်ပွဲ၌ ရဟတ်ယာဉ်ပါ ထိခိုက် သွားခြင်းကြောင့် အ၀ိုင်း ခံနေ ရသော ၄င်းတို့ တပ်ဖွဲ့ များထံသို့ ယခုအထိ လာရောက် စစ်ကူပေးခြင်း မရှိသေးပေ။ http://www.facebook.com/photo.php?v=3529793463472&set=vb.1831311223&type=2&theater
၄င်း စစ်ရဟတ်ယာဉ် များမှ ပစ်လွှတ် လိုက်သော ဒုံးကျည် များသည်လည်း ထိရောက်မှု မရှိ လှပေ။ ဒုံးကျည် များသည်KIA စခန်း အပြင်ဖက် များ၌သာ ကျရောက် ခဲ့ပြီး တချို့ တပ်တွင်း ကျသည့် ဒုံးကျည် များမှာလည်း ပေါက်ကွဲခြင်း မရှိပေ။ အဆိုပါ ဒုံးကျည် များသည် ရုရှား စာသားဖြင့် တံဆိပ်များ ရိုက်နှိပ် ထားသော ဒုံးကျည်များ ဖြစ်ကြ ပါသည်။
ချေမှုန်း ခံခဲ့ရသော အစိုးရ တပ်ဖွဲ့သည် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့သော နေရာနှင့် ဝေးဝေး ဆုတ်ခွာ နိုင်ခြင်း မရှိ သေးပေ။ စစ်ကူများလည်း မရောက်ရှိ သေးသဖြင့် ထိခိုက် ဒါဏ်ရာ ရသူ များနှင့် တနေ ရာ၌ ခြေကုတ် ယူထားဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့သည် KIA ကို ပြန်လည် စစ်ဆင် နိုင်မည့် အနေ အထား မရှိတော့ဘဲ KIA ၏ ထပ်မံ ချေမှုန်းခြင်း မခံ ရအောင် ရှောင်ကွင်း နေမည်ဟု စစ်ရေး အကဲခတ် များက ဆိုပါသည်။
KIA + ABSDF
Mother and Father side Karen Song(Saw Kaw Kaw)
သံဃာတော်တွေကို အကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ အစိုးရလုပ်ရပ် DKBA ရှုံ့ချ(RFA)
အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖြေရှင်းပုံဟာ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ကလိုထူးဘောဒေသ အခြေချ DKBA စစ်ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဆန်းအောင် က RFA ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂ဝဝ၇ ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းတုန်းက မိမိတို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ရပေမဲ့၊ ၂ဝ၁၂လက်ပန်းတောင်းတောင်အရေးမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကို အစိုးရက အရေးမယူဘူးဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်းလည်း ဗိုလ်မှူးကြီးဆန်းအောင်က ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်း ဒီကိစ္စအပေါ် ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့မြင်ကြောင်းလည်း ဗိုလ်မှူးကြီးဆန်းအောင်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ခါန်.ဆိုဒ်ကံင်း ဆ်ုပြိုင့် လ်ုဖး
K I C ကရင်သတင်းစဉ်
ထမ့်ဟင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဒုက္ခသည်များ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့
ယ်ုလေ၀်စါင်း ကဲိုဟှိင်းလ်ုဖး
MP3 ဓ၀်. လ်ုဖး
နောရှောင်မူး(ဏင်.ယှင်မူး)ကရင်ရာဇ၀င်ထဲက ရော်ဘာသူဌေး ကိုရွှေလေး တစေ့တစောင်း
Template Design by သူရေ၀့်ဖါန် | Sponsored by လာလည်သူအပေါင်း ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ